Hogaamiyihii kooxda Daacish oo gacanta lagu dhigay
May 21, 2020 Mahad Jama 0
LONDON(P-TIMES)- Ciidamada dalka Ciraaq ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen ninka la rumaysan yahay inuu badalay hogaamiyihii hore ee Kooxda Daacish Abu Bakar Al-Baqdadi, kaas oo lagu dilay howlgal ay ciidamada gaarka ah ee Marekanka ka fuliyeen gobolka Idlib ee dalka Syria bishii October ee sanadkii hore.
Hogaamiyaha ay sirdoonka Ciraaq sheegeen in gacanta lagu dhigay ayaa lagu magacaabaa Amir Mohammed Abdul Rahman Al-Mawli Al-Salbi, kaas oo la baxay magaca Cabdul Naasir Qardash.
Qardash ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa ninkii hoggaaminayey dagaalkii cuslaa ee bishii February sanadkii 2019 ka dhacay deegaanka Baquus ee dalka Syria.
Sirdoonka Ciraaq ayaa sheegay inay heleen xogta halka uu ku sugan yahay hogaamiyahan sidaasna ay ciidamada Booliska weerar ugu qaadeen guri ku yaala degmada Hawija ee Kirkuk oo dhacdo Waqooyiga Baqdaad isla markaasna ay suurta gashay in gacanta loogu soo dhigo isagoo watay aqoonsi been abuur ah oo lagu qoray magaca ah Shaclaan Cubeyd.
Naasir Qardash ayaa asal ahaan kasoo jeedo dadka Turkemen-ka Ciraaq ee ku nool gobolka Telafar oo u dhow magaalada Mosul ee Waqooyiga Ciraaq.
Illaa hadda kooxda Daacish kama ayna hadlin sheegashada sirdoonka Ciraaq ee ah inay gacanta ku dhigeen hogaamiyihii badalay Abu Bakar Albaqdaadi, mana jirto cadeymo muujinayo sheegashada ciidamada Ciraaq.